Sweden oo caddaynaysa in biyaheeda lagu soo xadgudbay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sweden oo caddaynaysa in biyaheeda lagu soo xadgudbay
Difaaca: waa lagu soo xad gudbey biyaha Sweden
La daabacay fredag 14 november 2014 kl 10.55
Sweden ayaa haysa caddayn ah, in biyaha Skärgård ee magaalada Stockholm ay ka dhacday xadgudub shisheeye oo biyaha hoostiisa ah, sida uu sheegay amaan duulaha ciidanka Sweden Sverkar Göranson.
- Ciidanka difaaca waxuu imminka xaqiijin karaa in gujis yari ay ku soo xad gudubtay
biyaha Sweden, taas wax shaki kuma jirto, waxaan imminka meesha ka saari karnaa
dhamaan sharaxaadaha kale, ayuu yeri amaanduulaha ciidanka qaran oo garbahiis
taagnaayeen wasiirka difaaca iyo ra’iisalwasraaha dalka, shir saxaafadeed maanta
lagu qabtay aqalka madaxtooyada.
Waxay aheyd jimcahii 17 oktber markii ciidanka qaran lagu soo wargeliyey in hoosta bihayaha Stockholm Skärgård ayaa ka socdaan howl-galo la tuhmayo in ay shisheeye ka danbeeyo. Difaaca qaran ayaa isla-markaasba billabeyn howl-gal lagu raadinayo gujis yar oo sawirkeeda lagu baahiyey saxaafadda, howgalkas oo socdey muddo asbuuca ah. Ka dib muddo markii ciidanka difaaca ka fallo ka diyaarinayey natiijadii howl-galka ciidanka qaran ayey maanta wasaaradda difaaca manta soo bandhigtey natiijadii howl-galkii ciidanka ka sameeyeen bartamahii oktober biyaha u dhow Stockholm.
- Najiitada aan laga gaban karin waxay noqotey in Sweden loogeystey xad gudub weyn oo aan la aqbali karin, taasna waa arrin serios ah, sidaas ma orna laheyn haddii aan isku hubin najiitada howl-galkii aan sameynay oo aan asagoo sharaxan u gubineyn dowladda.
Laakiin Sverker Göran waxuu intaas ku daray in difaaca qaran anan hubin cida iyo waddanka xad gudubka ku sameysey biyaha Sweden.
Wasiirka difaaca Sweden Peter Hultqvist oo shir saxaafadeed maanta ka hadlayey ayaa sheegay xad gudbiyada biyaha Sweden loo geysnayo ay muujineyso baahida loo qabo in la xoojiyo awooda ciidanka militeriga Sweden, arrinat imminka la xaqiijiyeyna ayaa cadeyneyso sida uu amniga u xumaadeyn deegaanada u dhow Sweden.
Sidoo kale Stefan Löfven ra’iisal wasaraaha ayaa sheegay in macluumadkan muujinaya xad gudubka lagu sameeyey biyaha Sweden uu yahay mid serios ah. Siyaasadda amniga ee Sweden ujeedadeeda waxay tahay sidii loo ilaalin lahaa sharafta xaduudaheena iyo madax banaanideedana iyo madax banaanideedana. Sugidda xaduudaha waa waajibaadka koobaad ee dowlad kasta